Himalaya Dainik » दोलखाका सरोज : जसले लक्ष्मीपुजाको दिन बनाए आफ्नै घरको ढोकामा ‘निर्मलाको रंगेली’
२२ कार्तिक २०७५ |
दोलखाका सरोज : जसले लक्ष्मीपुजाको दिन बनाए आफ्नै घरको ढोकामा ‘निर्मलाको रंगेली’
कंचनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको १०० दिन नाघी सकेको छ। हत्या भएको सय दिन नाग्दा पनि प्रहरीले पन्तको हत्यारा को हुन त्यसको भेउसम्म पाउन सकेको छैन।
छोरीको हत्याराको कारबाहीको मागसहित निर्मलाका बुवाआमासहित मानव अधिकारवादी स्थानीयवासीको चौतर्फी दवाब हुँदा पनि प्रहरीले हत्यारालाई कानुनी दायारामा ल्याउन सकेको छैन। तिहारको तेस्रो दिन गाई तिहार अर्थात् लक्ष्मी पुजा । लक्ष्मी पुजाको दिन धेरैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले रंगोली बनाउने चलन छ ।
धेरैको फेसबुकमा आफुले बनाएको रंगोली पोष्ट गरेको छ ।यसै बीच निर्मलाको पन्तको रंगोली बनाएर लक्ष्मीको पुजा गरेको तस्बिर एकाएक भाइरल भएको छ । उक्त तस्बिर दोलखा जिल्लाको जिरी नगरपालिका स्थित वडा नम्बर ४ का सरोज जिरेलले बनाएका हुन् ।
उनले आफ्नो फेसबुकमा निर्मला पन्तको रंगोली बनाएर ‘निर्मला पन्त लाई न्याय दिन नसक्ने हरुले आजको दिनमा लक्ष्मीको पुजा गर्नु धिक्कार छ! किनकी एउटि लक्ष्मी लाई अन्याय र अर्किलाई पुजेर अपराध लुकाउनुको कुनै अर्थ छैन!’ लेखेकाा छन । उक्त तस्बिर अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ ।
प्रकाशित मिति २२ कार्तिक २०७५, बिहीबार ०६:०७
शुल्क उठाउने नाममा आरजु देउवा नेतृत्वको युलेन्स स्कुलको यस्तो बदमासी !
लकडाउनमा दर्शकहरु लागि उपहार भन्दै सनीले शेयर गर्छिन् यस्ता फोटो : हेर्नुहोस
बझाङमा अनौठो चलन थाहा पाउदा दुनिया नै चकित
आज बिहिबारका दिन भुलेर पनि नगर्नुस् यी ५ कार्य, कंगाल भइन्छ !
ह्वात्तै बढ्यो सबै विदेशी मुद्राको भाउ
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना
तपाइको घर जग्गा काठमाण्डौंमा छ ? त्यसो भए महानगरपालिकाले ल्यायो कर उठाउँन नयाँ नियम (सूचिसहित)
अंगीकृत नागरिकतामा संवेदनशील नभए क्षेत्री समाजले आन्दोलन गर्ने
कोरोना भाइरस प्रभाव : अब विवाह पनि अनलाइनबाटै !
इटहरीका एक परिवारमा अचम्मको रोगः७ बर्ष पुगे पछि अपाङ्ग